Siyaasiyiinta Soomaalidu ma waxay Sweden u yimaadaan in ay haweenka cayrta la qaybsadaan? | Somaliska
“Mar walba oo siyaasi soomaali ah uu dalkan booqasho ku yimaado waxaa kor u kaca heer-kulka bulshada soomaali iswiidhishka ee dalkan ku dhaqan. Is qabqabsigu wuu bataa. Haddana markuu siyaasigaasu dalka ka baxo ayey dadku dib isugu soo noqdaan. “ sidaasi waxaa qoray Kenadid Mohamed oo ka tirsan idaacada Sweden, isaga oo ka hadlaya booqashada siyaasiyiinta Soomaalida ay ku yimaadaan Sweden.
Hadalka Kenadiid ayaa xambaarsan xaqiiqo dhab ah, oo aan wada marqaati ka nahay. Markasta oo siyaasi yimaado haddii uu yahay madaxweyne, gudoomiye degmo ama ambassadoor waxaad arkaysa kooxo qabiil xambaarsan oo garab yaacaya, kuwaasoo abaabulaya xaflado lagu ururinayo lacago aan la aqoonin sababtooda. Haweenka ayaa qaasatan la kiciyaa, iyaga oo hormood looda dhigo abaabulka xafladaha, sidaasna lagu jeeb mariyo xoogaagii yaraa ee ay ka heleen cayrta ama daryeelka caruurta.
Kenadiid oo hadalkiisa sii wata ayaa intaasi ku daray “Soomaalida reer Sweden saddex koox ayaa wax casuunta: Wadaaddada oo masaajidda laga casumo. Siyaasiyiinta oo kooxo daneeysteyaal ahi casumaan iyo abwaannada oo aanu ka maqneyn qudheedu danaha shakhsigu. Beryahan dambe waxaa ku soo darsantay koox la yiraahdo oday dhaqameedyo. Afartaa kooxoodba waxaa lagu casumaa dhaqaale ka yimid bulshada tabarta yar ee soomaalida reer Sweden iyo dhaqaale ka yimid ururrada oo ey ka heleen cashuur bixiyeyaasha. Waa inaan ka hadallo… Faa’iido iyo khasaare waxey leeyihiin.”
Waxaad maqlaysaa gudoomiyaha gobolka Banadir ama Madaxweynaha Galmudug ayaa Sweden imaanaya. Oo muxuu ka qabanayaa Sweden? Aaway shaqadii loo dirsaday ee ahayd sugitaanka amaanka iyo horumarka wadanka? shaqada ugu horeysa waa in uu dalxiis ku maro Sweden iyo in uu ka qeyb galo xaflado?
Dadka qurba joogta ah waxay iska dhaadhiciyaan been abuur marka ay tagaan Somalia ama marka ay soo booqdaan siyaasiyiinta iwm. Soomaalida Sweden waxay ka mid yihiin kuwa ugu faqiirsan bulshada Sweden. Qiyaastii 65% dadku waa shaqo la’aan. Hadaba sidee ku keenay in aan xoogaagii yaraa ee dowlada Sweden na siisay aan xaflado ugu qabano siyaasi dantiisa wata?
Booqashadu isku wada mid mahan oo qaar ayaa ka muhiimsan kuwa kale, qaasatan kuwa madaxda sare iyo dadka ka shaqeeya siyaasada arimaha dibada waa muhiim balse inta badan socdaalka siyaasiyiinta Soomaalidu waa macno la’aan ku wajahan xaflado iyo kulamo qabiil ku dhisan.
Sidee kula tahay adiga? maxaad ka leedahay socdaalka siyaasiyiinta iyo xafladaha?
Waxaan rabaa in la iiga jawaabo su’aal aan ka qabo qoraaga qormadan qoray.
Sweden sitaansiyiinta soo booqday gudoomiyaha gobolka banaadir iyo kan galmudug kaliyahaa mase mase waxay dhibtay Qoraaga maqaalka imaashada labadaas masuul ileyn waxaan la soconaa wax badane mahadsanidiin
Siyaasiyiinta somaliyeed badankood xasaskooda iyo caruurtii ey dhaleen ayaa qurbaha kunool o eey sweden kamid tahay. waxaan oran karaa muhiimadooda kowaad ee boqashada waa xaga familka. tan labaadna qofkii siyaasi soo dhaweeyo o xaflad u sameeyo waa wax wanaagsan o positiv ah.
Waxan aad iyo aad u jeclaan lahaan in dadka somaliyed bal fakeraan.Aduunka dhan inaan ka indho xiran nahay moodaa, qofka howl loo dhiibo waa shaqo la kid ah mida shaqooyinka caadi digaaa,qofku isaga daneesanaya ma ahane ma ahan wax la isku sharfo shaqadu ma ahan,madaxweyne kama duwana shaqo ahaan qofka caadiga meel ka shaqeeya qabto.qofka caadiga hadii uu shaqada u dirsatay qaban waayo, ,waqti ku iman waayo ,mushaar ma siin lahayd ?xaflad ma u qaban lahayd? maanta inta siyaasi imaatay Sweden qof waydiyey ma jiraa waxad qabato noo sheeg?meeqa saac ku qabataa maantii?. wixii lagaraa rabey intee le eg ka qabatay?meeqa lacag ah kugu ku baxda shaqadan?maxan ka sugi karnaaa bil gudaheed.qorshahaaga na tus oo diyaarsan?.shaqada adiga ma so raadsatay mise iyada kuso raadsatay? hadii awoodi waydo waxaas inad qabato ma maxaa ku qorshaysan? goormaa? hadii aynan saas samayn ma caafimad qabnaa isleedihiin akhyaarey aan tulaale uso qaadano wadanka aan joogno maanta qof meel shaqo ka shaqeeya bilaash la lacag lagu siiyaa sida siyaasiga somalia ma jiraa? waqtiguu rabo bixi kara iman kara,xafladana loo qabto wuu shaqeeyaa awgeed.Mahadsanidiin
Fikrad lala dhacay Habayaraatee wax khalad ah kuma jiraan lkn Runta wa la dhibsadaa ruuxi runta dheceb caro u dhimo
Runta markan isku sheegno siyaasinta somalia ama madaxweyna ha,ahaado ama siyaasi marba hadu yahay qof xil kahayo somali waqtigoda waxay siyaan dalxis iyo wadanba marsoo boqo mana qabsadan shaqadoda sidi loga bahnaa balse waxa kaxun kuwas daka qurba jogta ah ee udhigayo xafladaha dad bashal iyo dalxis kubixiyay waqtigoda iyo dhaqalihi wadanka logu talaga galay bal ufirsada calaamka sida ay udaxisan somalida mas,uul isku sheega ah majiro calaamka mas,uul u daxiso
Asc dhamaan asxaabta dhamaan ngoyada kajira aduunka badanaa musuq maasuq aa kujira kamana wanaagsana kuwa somaalida kuwaas kamana xuma mida kale siyaasiga soomaaliga ah ha xumaado ha samaado hadaadan adi soodhaweyn oo aad adan talo kubiirin ama wax weydiin yaa soodhaweynaayo sxbyaal raali ahaada siyaasiga ha xumaada áma hasamaado waa midkeynee yurub amaerica africa iyo qaaradaha kale noomasoodirayaan siyaasiyiin fiican ee kuweyna amaanano oo an marna canaano inshallaah mar uun bay hagaagi
suasha aad qoraaga waydisay hadan jwb kaga bixiyo ,walal sideedaba example marka wax laga bixinayo hal ama labo aa laga soo qata mahan ururada dhaman in safka laga soo wada maro labadas iyo inta kale oo lamidahiba dan dadka uma hayaan adna kuma hayaan ee walal waliga qabiil haka duulin
(( danbi dhacay masuul ma leh, markaad hebel duqaysaa reer hebel damqanayaa ))
abwaan Gaariye ahun. bacda salaan waxan aad uga xumahay ugana niyad jabsanahay halka ay xumada qabiilku inaga joogta waxana ii muuqata in caafimad inaga fogyahay hadii aan nahay bulshada soomaaliyeed meelkasta oo aan caalamka ka joogno kama korno qabyaalad iyo musuqmasuq. dadka sida Hussein oo kale ah ee ay xumadu sida xun u haysana kiniino ha qaateen xanuun biiye ah dawo kale malaha qabyaladu. hadii aan usoo noqdo safarka siyaasiyiinta waa danbiilayaal in lala xisaabtamo oo la cayriyo ayay mudanyihiin lakiin soo dhawayntoodu waxay ka dhigantahay in lagu abaal marinayo dhibtii ay gaysteen oo la leeyahay halkaas ka wada shaqo fiican baan noo haysaane, siyaasiyiintu waa kuwii inasoo qaxiyay ee wadankeena gubay ee isku keen diray ee hubka isuguken dhiibay hantideeniina boobay ayaga oo dantooda iyo kursiga isuhaysta.
waa sax siyaasiyiinta waxa eey rabaan in eey ceyrta dumarka iyo caruurta la cunaan mana xishoodaan umadna dan uma hayaan lkn waxaa laayaabaa dadka qurbhaha jooga oo aad ugu waalan qabyaalada qabyaalad awgeed siyaasiyiinta kusoo dhaweeya marka taas wey cadahay in eey ceyrta la cunaan tasi waxaa usabab ah somalida qurbaha joogta oo noqdeen kwa qabyaald dishay marka runta laga hadlo taas ayaa sabab unoqtay waxa noqonay bulsho aan danteeda garan
anigu runtii horaan ulla yaabay mana tago lacagna kuma bixiyo laakiin waa qalad ayaan qabaaa waxa niman kaas loo horboodayo siyaasi iyo oday dhaqameedba.
tan siyaasada iyo qabiilka waa mid gooni ah balse kii warbixinta qoray iyo adiga oo ku raacay waxaa ku xasuusinaa Soomaalidu inaysan ahayn dad faqri ah sida aad warbixintaada kusoo daabacday taajirnimadana maaha shilinka ay kula tahay.
Qaninimada waa iimaanka sxb. KALIMADA TAWXIIDKA KAAN ILLAAHEY SIIN OO AY KA MAQAN TAHAY AA FAQIIR. faafaahin hadaad u baahan tahayna cullumada waydii…
Abubakar waa runtaa oo imaanku iyo islanimadu waa qaninimo iyo nimco rabigeen ayanan uga mahad celinaynaa.
waxanse ka xumahay in aanad fahmin mawdhuuca iyo waxa laga hadlayay fadlan hadii aanad fahmikarin waxa laga hadlayo iska amus oo dadka nabad gali ama fakir caafimad qaba oo la fahmi karo ku darso.
sida wax loo qoray Ayaan arkay sxb wariyaha marka inuu mawduuc ka hadlo in uu bulsho u gafo ma,aha. Qofki siyaasi soomaaliyeed soo dhawaynaayo qabiil haku soo dhaweeyo ama wadaninimo ha usoo dhaweeyo taas mawduucas kama hadlin hadey fiican tahay iyo hadeey xun tahay. Soomaalida Sweden waxay ka mid yihiin kuwa ugu faqiirsan bulshada Sweden. intaas Ayaan ka hadlay marka inaan faqri ahayn Ayaan sheegay kaliya oo dad iimaan leh ah. Tan kale Aamus war maaha bro caafimaadna ALXAMDULILLAAHI.
Jimcaale waxaan ku leeyahay si ra yiga loo cabiro qoraalka ma Kenadiid ayaa qoraray dhammaantiis mise waxaad ku dartay faahfaahni (acqiib) ?
su aashaas markaad ka jawaabto ayaa wax laga sheegi karaa ra yigaan
Waar nikan webka wuu kharibay wax lacala faaiideystaa loo bahnaa anigu dina uma soo galayo